जलजलामा "एप्स" मार्फत कर तिर्न सकिने ! - Bulbul Samachar
जलजलामा “एप्स” मार्फत कर तिर्न सकिने !
bulbul बिहिवार, कार्तिक ११ गते 128 views
जलजला गाउँपालिका पर्वतले सेवाग्राहीको सहजताका लागि घरमै बसेर सम्पत्ति तथा भूमि कर तिर्न सकिने सुविधा सुरू गरेको छ। गाउँपालिका कार्यालयले मोबाइल एप्समार्फत सम्पत्ति र भूमि कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। थोरै कर तिर्न पनि धेरै खर्च गरेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘आइएमई पे’मार्फत कर तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
गाउँपालिकाको कार्यालयका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत अनिल खत्रीले गाउँपालिकामा रहेका ७ हजार ८०० करदाताले यो एप्समार्फत सजिलै कर बुझाउन सक्ने बताए। मोबाइल सेटमा आइएमई पेको एप्स डाउनलोड गरेपछि त्यसभित्र जलजला गाउँपालिकाको ‘सब टाइटल’मा गएर आफूले तिर्नुपर्ने रकम सिधै गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। एप्स सञ्चालनमा आएको केही दिन मात्र भएकाले अहिले ८र१० जना करदाताले मात्रै रकम जम्मा गरेको उनले बताए।
‘एप्स’ मार्फत नै कर तिरेका जलजलाको करदाता मिलन मल्लले गाउँपालिकामा पुगेर घण्टौँ लाइनमा बसेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउँछन्। आइडी लग इन गरेपछि आफूले तिर्नुपर्ने रकम पनि त्यहीँ देखिने भएकाले सहजै एक मिनेटमा नै आफूले तिर्नुपर्ने कर बुझाएको बताउँदै उनले अनलाइनका माध्यमबाट तिर्न सकिने सुविधाले धेरै सुविधा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। अनलाइनका माध्यमबाट कर तिर्दा गाउँमा रहेकालाई त भै नै हाल्यो, बसाइँ सरेर वा अस्थायी रूपले गाउँपालिका छाडेर बाहिर गएर बसेकाहरूलाई झनै फाइदा भएको उल्लेख गरे। साभार –थाहा खवरवाट
बेनी नगरको अध्यक्षमा जिसी !